गायिका इन्दिरा जोशीसँग इंगेज्मेन्ट गर्ने को हुन् शरद केडिया ? – Kavrepati
Home / मनोरंजन / गायिका इन्दिरा जोशीसँग इंगेज्मेन्ट गर्ने को हुन् शरद केडिया ?
admin September 25, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 119 Views
काठमाडौं । गायिका इन्दिरा जोशीले फेसन डिजाइनर शरद केडियासँग इंगेज्मेन्ट गरेकी छन् । शरदले इन्दिरालाई हेलिकोप्टरमा खुम्बु पुर्याएर औंठी साटासाट गरेका हुन् ।
‘लूट’ फिल्मको आइटम गीत उध्रेको चोली….बाट चर्चामा आएकी गायिका इन्दिरासँग इंगेज्मेन्ट गरेका शरद पेसाले फेसन डिजाइनर हुन् । काठमाडौ, नक्सालमा फेसन स्टोर चलाइरहेका उनी विभिन्न नयाँ डिजाइनका डे«स तयार पार्न माहिर छन् ।
Previous वि’वाह भएपछि यु’वतीहरु मो’टाउनुको खास कारण यस्तो रहेछ?
Next विष्णु माझीको अर्को गीत पनि बन्यो हिट, ३० घण्टामा १० लाख बढीले हेरीसके (भिडियो सहित)